Math books – Janaale publishers
Somaliska modersmålsböcker, somaliska läromedel, Somaliska språk böcker
Diin iyo Dawaco
Baraarug Book One
Baraarug book Two
Baraarug book three
Af-tahan book One
Af-tahan book two
Janaale publishers produce also math books in different levels. We produce math books from grade two to grade eight. Our math books are well designed and formulated. The books are entitled to the somali language speaking students in elementary and intermediate levels. The lessons give a well-guided and explained lessons. Students will flow mathemathical process explained in examples. Then the students will solve the mathmathical questions and problems. Each chapter begins with an introduction and ends with questions and facit for the questions.
You can read the undermentioned Najaax serial books. If you want to buy some books please contact the writer of the books Mr Amoore or janaale publishers
Mr Amoore, Tel: 0765666705 Email: camooremirre@gmail.com
Taxanaha buugaagta xisaabta Najaax
Buugga Xisaabta Najaax 2. Wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada labaad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 9 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Isku-darka, Kala-goynta, Qiimarugeedka, waqtiga, Tirada kinsiga ah iyo Tirada dhabanka ah, labanlaabka tirooyinka iyo kala badhka tirooyinka, sku-dhufashada,iyo isu-qaybinta tirooyinka. ,iyo cutubka jawaabaha. Waxaan rejeynayaa in buuggani ku filaan doono barashadada xisaabta dugsiyada hoose iyo kuwa dadka waaweyn.
Buugga Xisaabta Najaax 3. Wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada saddexaad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 10 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Isku-darka, Kala-goynta, Qiimarugeedka, waqtiga, Tirada kinsiga ah iyo tirada dhabanka ah. Tirooyinka sun-sunka ah, Duubista tirada, Barashada waqtiga, Jajabyada, isku-dhufashada,iyo isu-qaybinta tirooyinka. ,iyo cutubka jawaabaha. Waxaan rejeynayaa in buuggani ku filaan doono barashadada xisaabta dugsiyada hoose iyo kuwa dadka waaweyn.
Buugga Xisaabta Najaax 4. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 9 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tirooyinka idil, Jajabka, Cabiraadda dhererka, Saacadaha, Kullannada iyo dhidibada, Bedka iyo wareegga, Isiraynta tirooyinka , joometeri , Boqolkiiba, Naqtiinka buugga oo dhan iyo Jawaabaha su’aalaha buugga iyo cutubka jawaabaha. Waxaan rejeynayaa in buuggani ku filaan doono barashadada xisaabta dugsiyada hoose iyo kuwa dadka waaweyn.
Buugga Xisaabta Najaax 5. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 10 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tirooyinka idil, Jajabka, Bedka iyo halbeegyada, Joometeri, xisaabinta waqtiga, Habka kulammada iyo garaafyada, Saamiga, Aljebra bilow ah, naqtiin guud iyo horumarka aad samaysay iyo Jawaabaha laylisyada. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.
Buugga Xisaabta Najaax 6. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 13 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tiro idil, Xisaabfallada tirooyinka, Jajabka, Bedka iyo dhererka, Mugg iyo qaad, Halbeegyada wax lagu cabbiro, Boqolley, Joometeri, Fududaynta tibaaxaha aljebra, Saami iyo Saamigal, Garaafyo iyo Tusayaal,Celcelisyo, iyo Naqtiin guud dhammaan cutubyada buugga. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.
Buugga Xisaabta Najaax 7. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 13 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tiro idil, Xisaabfallada tirooyinka, Jajabka, Bedka iyo dhererka, Mugg iyo qaad, Halbeegyada wax lagu cabbiro, Boqolley, Joometeri, Fududaynta tibaaxaha aljebra, Saami iyo Saamigal, Garaafyo iyo Tusayaal, Celcelisyo, iyo Naqtiin guud dhammaan cutubyada buugga iyo Cutubka jawaabaha. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.
Buugga Xisaabta Najaax 8. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 14 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Naqtiin abyoonayaal, Naqtiin jibbaarrada, logaridam, argtida baytogaros, Qaybaha bedka ee goobada, Bedduleedka iyo qaadka, Fududaynta tibxaha, habka isiraynta, Isleegyada, Ismala’egyada, Isleegyada wada-jira, tiirada xarriiqa toosan, Celcelisyada, ixtimaalka xisaabta, Jawaabo iyo xallin iyo Naqtiin guud dhammaan cutubyada buugga iyo Cutubka jawaabaha. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.
Download the order forms and the catalogue
Books catalogue – Liiska buugaagta
Order form in Excel (Foomka dalabka oo buugaagtu ay ku qoran yihiin)
Order form in Excel (Foomka dalabka oo madhan)
Order forms in PDF (Foomka dalabka oo PDF ah)
Iqra buugga alifbeetada. Fasalka 1aad
Iqra buugga higgaadda. Fasalka 2aad
Buugga Iqra fasalka saddexaad
Aflax buugga barashada akhriska & qoraalka. Fasalka 4-aad
Aflax buugga barashada akhriska & qoraalka Fasalka 5-aad
Buugga Aflax fasalka lixaad
Buugga baraarug fasalka siddeedaad
Buugga Baraarug Fasalka toddobaad
Buugga baraarug, dugsiga dhexe, buugga 3aad
Af-tahan: Buugga 1aad. Dugsiga sare. Fasallada 1aad & 2aad
Buugga Af-tahan dugsiga sare buugga 2aad
Janaale publishers advertisement
Janaale Publishers facebook page
Ali la kor dhabay, Alif la hoos dhabay
Waxaan nahay waadiga dugsiyada
Aqoon la,aani waa iftin la,aanee
Taa taa ma barannaa
Gotenburg Book fair
Introduction to Janaale publishers